Mpanamboatra sy mpamatsy HDPE - China HDPE Factory
1oz 30ml mena HDPE tavoahangy boribory vita amin'ny vozony 16-410
Ny tavoahangy mitete mena 30ml anay dia vita amin'ny fitaovana HDPE. Serivisy OEM: Pirinty vita amin'ny lamba landy Logo, marika taratasy, labozy plastika, aforeto, mora ampiasaina sy hadio. Afaka manamboatra ny sary famantarana ny orinasanao, manatsara ny vokatra marika an'ny orinasanao. Ny endrik'ilay tavoahangy plastika amin'ny ankapobeny dia feno, manome anao traikefa mahatsapa tanana tsaratsara kokoa sy ny valin'ny fampisehoana talantalana. Ny satrony tavoahangy dia manisy satroka visy sy tombo-kase mba hahazoana antoka ny famehezana 100% ny vokatra. Azo ampiasaina hanaparitahana sy hitehirizana ny ankamaroan'ny rano. Tsara ho an'ny solvents, menaka maivana, loko, fotony, sigara elektronika, solika, masira, sns. tavoahangy. Miaraka amin'ny sisin-dàlana matevina kokoa. Mety amin'ny savony maitso na filan'ny alikaola. fanoloana lehibe ny tavoahangy famafazana, mampihena ny fahalotoan'ny rivotra.
1oz 30ml fotsy HDPE tavoahangy fisaka vita amin'ny vozona 18-410
Ny tavoahanginay fotsy 1oz 3ml dia vita amin'ny fitaovana HDPE. Vita amin'ny 100% akora tany am-boalohany resina PET. Vokatra fonosana maoderina, biodegradable, ECO friendly. Ampiasaina tsara amin'ny vokatra fikolokoloana sy fikarakarana manokana. Fonosana mety tsara ho an'ny menaka hoditra, shampoo, famafana, menaka fanorana tsotra, tavoahangy fanosotra volo, savony, asehoy ny gel, sns. Serivisy OEM: Pirinty vita amin'ny lamba landy Logo, marika taratasy, labozy plastika, aforeto, mora ampiasaina sy hadio. Ny haben'ny kely dia mety amin'ny fitsangatsanganana na amin'ny fitehirizana sy ny fandaminana manodidina ny trano.
Tavoahangy boribory HDPE 3,4oz 100ml fotsy misy vozony 18-410
Ny tavoahanginay fotsy 100ml dia vita amin'ny fitaovana HDPE. 100% marika vaovao sy avo lenta. Vita amin'ny plastika, azo ampiasaina indray, mahatohitra triatra ary azo simbaina. Ny endrika clamshell dia mety kokoa ampiasaina. Ny fitaovana tonga lafatra amin'ny fikolokoloana ny hoho sy ny makiazy. Azo soloina sy azo refillable. Azo ampiasaina hizara sy hitahiry ny ankamaroan'ny rano Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php/ Serivisy OEM: Pirinty vita amin'ny lamba landy Logo, marika taratasy, labozy plastika, aforeto, mora ampiasaina sy hadio. Ny haben'ny kely dia mety amin'ny fitsangatsanganana na amin'ny fitehirizana sy ny fandaminana manodidina ny trano.
3ml voajanahary PE Gynecological landihazo fitantanana fitehirizana fitaovana
Ny mpangataka fivaviana / anal 3ml anay dia vita amin'ny fitaovana PE, izay manana tombo-kase sy malama tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanaterana zava-mahadomelina ho an'ny vovoka pilina. Ny fantsona dia fantsom-boribory misy savaivony lehibe. Afaka manome anao fahatsapana tsara kokoa sy valin'ny fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
5ml voajanahary PE Gynecological landihazo fitantanana fitehirizana fitaovana
Ny mpangataka fivaviana / anal 5ml anay dia vita amin'ny fitaovana PE, izay manana tombo-kase sy malama tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanaterana zava-mahadomelina ho an'ny vovoka pilina. Ny fantsona dia fantsom-boribory misy savaivony lehibe. Afaka manome anao fahatsapana tsara kokoa sy valin'ny fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
HD HD 17 Oz mazava mihazona mitazona tavoahangy plastika vita amin'ny vozony 28-400
Ny tavoahangin-tsika 17 oz / 500ml dia vita amin'ny fitaovana HDPE ho an'ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana tsara kokoa. Ny vatan'ny tavoahangy dia tànana, manome anao traikefa tsara kokoa amin'ny tanana sy ny vokatra fampisehoana talantalana. Ny rindrin'ny tavoahangy dia azo asiana marika amin'ny orinasanao, ary ny soroky ny 28/400 dia azo ampiarahina amin'ny paompy famafazana, paompy famaohana ary paompy mibontsina, izay mora kokoa entina sy ampiasaina. Azo ampiasaina amin'ny fanadiovana an-dakozia, fanadiovana rano amin'ny zavamaniry, vokatra fanadiovana ary fonosana hafa.
New style 3-5ml fotsy voajanahary dispenser fivaviana PE
Ny fantson'ny gel fivaviana 4ml dia vita amin'ny fitaovana PE, izay misy famehezana sy malama tsara kokoa. Boribory ny fantsona ary ny tsorakazo anatiny dia miaraka amin'ny peratra silika izay misy vokany famehezana tsara kokoa. Afaka manome anao fahatsapana tsara kokoa sy valin'ny fampisehoana talantalana. Rehefa ampiasaina, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fampifanarahana ny fivarotana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana na amin'ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana hiditra ao amin'ny fantsona hanosehana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. . Azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, fonosana fikarakarana anal, sns. Mety ho entina sy ampiasaina izy io.
New style 3ml voajanahary dispenser PE Vagino-anal
Ny fantson'ny gel fivaviana 3ml dia vita amin'ny fitaovana PE, izay manana famehezana sy malama tsara kokoa. Boribory ilay fantsona. Afaka manome anao fahatsapana tsara kokoa sy valin'ny fampisehoana talantalana. Rehefa ampiasaina, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fampifanarahana ny fivoahan'ny zava-mahadomelina amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona manosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fantsona Vagina na anus. Azo ampiasaina amin'ny fanaterana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikarakarana fivaviana, fanaterana fanafody anal, fonosana fikolokoloana, sns ... Mora entina sy ampiasaina izy io.
Tavoahangy HDPE mavokely 2000ml mavokely misy tendany 56-410
Ny tavoahangy plastika 2L HDPE (polyethylene avo lenta) misy sarony, maharitra sy azo averina. Izy io dia mety indrindra amin'ny menaka esory, detergent, lotion, shampoo, menaka amin'ny vatana, loko, ranomainty, ranon-tsavony, solika, pigment, reagent, glues ary adhesives, santionany, fampiasana isan'andro na vokatra namboarina. Tena mahatohitra ny ankamaroan'ny solika sy ny akora simika izy io., Na izany aza tsy mifanaraka amin'ny hakamoana mafy sy ny fidiran'ny solvents organika mahery. Tider Evident Lids Keep Keep Keep Keep Keep Keep Keep safety safety safety safety.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
Tavoahangy HDPE manga 1000ml manga misy vozony 56-410
Ny tavoahangy plastika 1L HDPE (polyethylene avo lenta) misy sarony, maharitra sy azo averina. Izy io dia mety tsara ho an'ny menaka esory, menaka fanosotra, shampoo, menaka amin'ny vatana, loko, ranomainty, ranon-tsavony, simika, pigment, réagen, glues sy adhesives, santionany, fampiasana isan'andro na vokatra namboarina. Manohitra mafy ny ankamaroan'ny solika sy akora simika izy io., Na izany aza tsy mifanaraka amin'ny hakamoana mafy sy fidirana mafy amin'ny solvents organika.